သ မ္မတ ဦး သိ န်း စိ န် အ စိုး ရ အ ဖွဲ့ လ စာ တွေ ဘ ယ် လို ယူ ထား သ လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သ မ္မတ ဦး သိ န်း စိ န် အ စိုး ရ အ ဖွဲ့ လ စာ တွေ ဘ ယ် လို ယူ ထား သ လဲ
Posted by chatsu on Dec 11, 2011 in Copy/Paste | 16 comments
I think it’s fair. Ship’s captains or chief engineers earn around $5000. To be able getagood standard living condition,apresident also needs that amount of money in our country.
တာဝန်ယူရသူဟာ အခွင့်အရေးများများ ရ ရမယ်။
အခွင့်အရေး ယူတဲ့သူဟာ တာဝန် ကိုလည်းယူရမယ် ဆိုတာမျိုး ရှိမှာပေါ့။
မပြောရင်လဲ မဖြစ်ဘူး … ပြောရင်လဲ အနီကဒ်က ထိဦးမယ်…
ထိဟာ ပြောမယ် .. ပထမဆုံး ဘယ်နေရာမှာမှ တစ်ဒေါ်လာကို ၆ကျပ်နဲ့ မရဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်..။
အပေါ်မှာရေးပြထားတယ် ။ သင်္ဘောကပ္ပတိန်တစ်ယောက်က တစ်လကို ဒေါ်လာ ငါးထောင်ကျော်ရတယ်ဗျာ..။ဒါကြောင့် သမ္မတ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သိန်းငါးဆယ်ရတယ်ဆိုတာလဲ တရားတယ် ။ ကျွန်တော် သမ္မတ ဖြစ်ရင်လဲ ဒီလောက်မှ မရရင် မလုပ်နှိုင်ဘူး..။တခြားတိုင်းပြည်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံက ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ မြန်မာပြည်က ကုန်ဈေးနှုန်း ပြန်ယှဉ်ကြည့်ဖို့လဲ လိုမယ်.။မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်ဈေးနှုန်းကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမို့ ပြောမပြတော့ပါဘူး..။
နောက် အဆောင်အယောင်ကိစ္စ ၊ နိုင်ငံတော်မှာ အမြင့်ဆုံးတာဝန်ယူထားရသူတစ်ယောက်အဖို့ ဒီလောက်တော့ အဆောင်အယောင်ရှိရမှာပေါ့ ..။ သမ္မတဖြစ်ပြီှးစုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေလို့ရမလား..။သူယူထားရတဲ့ တာဝန်နဲ့လျှော်ညီစွာ အဆောင်အယောင်ကလဲ ရှိကိုရှိရမှာပါပဲ..။တိုင်းပြည်အရေးကို ဦးစားပေးလုပ်နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ မိသားစုအရေးကို ပြန်လှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင် ဖန်တီးပေးရမှာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်..။
တခြားမကြည့်နဲ့ဗျာ ..။ဟီလာရီလာတုန်းက ဘယ်လိုလေယဉ်နဲ့လာသလဲဆိုတာ ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့သမ္မတ ဘယ်လိုအဆင့်အတန်းရှိလဲ သိသာတယ်..။သူတို့ဆီမှာ သူတို့ သမ္မတကို ဘယ်လိုထားသလဲ ..။ တခြားနိုင်ငံက ဘုရင်မသောက်တဲ့ရေကိုတောင် မတိုက်နှိုင်ဘူးဆိုပြီး ရေတောင် ယူလာတယ်မလား ..။
အူမမတောင့်တဲ့သူတစ်ယောက်က သီလ မစောင့်နှိုင်ဘူး..။ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့ခေတ် ကုန်သွားပြီ ..။အလုပ်ကိုသေချာလုပ်စေချင်ရင် လစာကိုလဲ ကောင်းကောင်းပေးရမှာပဲ ..။ဒါ အခုအစိုးရတစ်ဆက်ထဲကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး ..။နောက် သမ္မတ တက်လာရင်လဲ ဒီလိုပဲ ပေးရမှာပဲ ..။
တကယ်တော့ အခုလိုလစာမျိုးပေးထားတာကို မဝေဖန်သင့်ဘူး..။ဒါ ရသင့် ယူသင့်တဲ့ကိစ္စလေ..။မရသင့် မယူသင့်တဲ့ လာဘ်စားတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိရင်သာ ၀ိုင်းဝေဖန်သင့်တယ် ..။
ယူသင့် ပါ တယ်။ လာဘ်တော့မစားနဲ့။ရာထူး လက်ခံ ရင် ပိုင်ဆိုင်မှူ ကို အရင် ကျေ ငြာ ရမယ်။
ပွင့်လင်းမြင် သာ ရမယ်။
နောက်တစ်ခုက အခုမေးခွန်းနဲ့ အဖြေက ဘယ်သူ မေးလို့ ဘယ်သူက ဖြေလဲဆိုတာကိုပါ သိချင်ပါတယ် ..။
သူများယောင်တိုင်း ရှောက်ယောင် အမောင် တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိလို့တော့ မဖြစ်ဘူး …
သူတို့ ဒီလိုရကြတာ သူတို့တာဝန်ကို ကျေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ကျင့်ဝတ်တွေကို စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် ရသင့်ကြပါတယ်။ သမ္မတကြီးသည်ပင် တစ်နှစ်မှ အသားတင်လစာ သိန်း၆၀၀ ပဲ ဆိုတော့ နှိုင်းယှဉ်ရလျှင်-
-ဘုရင့်နောင်က အလတ်စားသီးနှံကုန်သည်တယောက် – သိန်း ၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ကြား
-သစ်ကား၂စီးထောင်ထားတဲ့ နယ်က လုပ်ငန်းရှင်အလတ်စား – သိန်း ၅၀၀ ခန့်
-ရန်ကုန်က အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတခုရဲ့ အသားတင်အမြတ်- သိန်း ၁၀၀၀ ကျော်
ယှဉ်ကြည့်ရင် များတယ် မဆိုနိုင်ပါဘူး။
သူတို့အားလုံး(စစ်+ကြံ့) အလုပ်ကထွက်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီလစာတွေထက် ၂ဆ တသက်လုံးပေးထားရလဲ တန်လှပါတယ်လို့ ယူဆပါကြောင်း။
သေချာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လို လူမျိုး နောက်ထပ် 10 သက်မရနိုင်တော့ဘူ။
နောက်ဆယ်သက်တော့ မပြောပါနဲ့ ကိုယ့်လူရာ …..
ကျုပ်တို့လူမျိုး အဲ့လောက် အခြေအနေ မဆိုးသေးပါဘူး…
ဗိုလ်ချုပ် ခေတ်လွန် ဦးသန့်ပေါ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား …
ဦးသန့် ခေတ်လွန် အမေစု ပေါ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား …
နှစ် ၂၀ စီလောက်တော့ ခြားတယ်ထင်တာပဲဗျ….
သည်၃ယောက်ကိုပဲကြည့်ဗျာ ..ကွဲပြား ခြားနားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေနော..
အရည်အချင်းကို base လုပ်သလား..ဒါမှမဟုတ် သူတို့ based ထားတာ
knowledge လား ..သတ္တိလား …..မေတ္တာတရားလား …တခုခုပေါ့ဗျာ…..
ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို တ,နေလို့တော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဗျ…..
ကျုပ်တို့ ဗမာတွေ လေးစားတယ် ကြည်ညိုတယ် သိပ်ပြောကြတယ်….
လေးစား အားကျတယ် ဆိုတဲ့ဗမာ စကားရှိပါတယ်…..
ဗိုလ်ချုပ် လို့ အော်နေတဲ့လူ အတော်များများက လေးပဲ လေးစားတဲ့အစားတွေ
တန်ခိုးရှင်တယောက်ယောက်က မင်းကို အောင်ဆန်းအဖြစ်မွေးဖွားပေးလိုက်မယ်…
မင်း ဟာ အောင်ဆန်း ရဲ့ဖြစ်စဉ်အတိုင်း တသွေမတိမ်းဖြစ်ပျက်ခံစားရမယ်…….
မင်း လက်ခံမလား ဆိုမေးလာရင် ….အနှီလေးစားပါတယ် အော်နေတဲ့လူအပေါင်းမှာ
အများစုက ဟင့်အင်း ပြောကြမှာဘဲ …
သည်တော့ ရှင်းပါတယ်ဗျာ ..လေးစားတာ လေးစားလို့ရတယ်….ကြိုက်တဲ့လူ လေးစားပစ်လိုက်
ဒါ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးဘဲ …အဲ …အားတော့ကျလိုက်ဗျာ …
အတုခိုးကြည့်လိုက် …လိုက်လုပ် ကြည့် ကျင့်သုံးကြည့်လိုက် …ကိုယ်လေးစားတဲ့လူကို…
ကျုပ်တို့ဟာ နောက်ထပ် သခင်အောင်ဆန်းတယောက်ကို မျှော်နေရမှာမဟုတ်
ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင် သခင်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ ပြုမူကျင့်ကြံရမည်ဖြစ်သည်…
ထိုတရားကို သခင်အောင်ဆန်းသည် အသက်ပေး၍ ဟောကြားတော်မူပြီးဖြစ်သည်…
မြန်မာပြည်ထဲ.. တိုင်းပြည်အတွက်..ဘာမှမလုပ်ပဲ.. သမ္မတထက်များထက်လစာငွေ(၀င်ငွေ) ရထားသူတွေ.. အများကြီးပါ..။
အမြတ်ခွန်/၀င်ငွေခွန် စံနစ်တွေသေချာ လုပ်ပြီး ဥပဒေပြုပေးဖို့ လိုတယ်ပဲထင်မိပါတယ်..။
တန်ရာတန်ကြေးယူပြီး.. တန်သလိုလေး လုပ်ပေးကြပါလို့..
ယူအက်စ်သမ္မတတွေများ.. သမ္မတသက်တန်း ၄နှစ်၂ကြိမ် ၈နှစ်ပြီးတာနဲ့.. မြောက်အိုလို.. ရုပ်တွေကျဆင်း.. အိုစနာဖြစ်သွားတာပါပဲ..။
တခြားထားလို့ အသက်အငယ်ဆုံးသမ္မတ အိုဘားမားတောင် တော်တော် “အို”ဘားမား ဖြစ်လာတာ သတိထားမိတယ်။
ကြိုက်တယ် သဂျီး ….
(သည်ရက်ပိုင်း ….နမိုးနီးယား က ဦးနှောက်ထိသွားလားမသိ သဂျီးကို လွှတ်ကြည်ညိုနေတော့တာကိုး…)
နောက်တာပါဗျား …ဖားသက်ပြင်း ဆိုတော့ မားကတ်တင်း အမြင်နဲ့ပဲ မန့်မယ်ဗျာ..
သဂျီး အခုလို Physical evidence တွေ ထုတ်ပြနိုင်တာ သိပ်ကြိုက်တယ်ဗျ…(Marketing’s7Psကိုရှုပါလေ)
နောက်တချက်…လူဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါတွေက .. compare and contrast သိပ်လုပ်ကြတာကလား …
မှန်၏ လုပ်သင့်တာပေါ့ …. တခုတော့ရှိတယ်နော ….
ဆိုက်ကားသမားတယောက်၏ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာနဲ့ ကျောင်းဆရာတယောက်၏ လူ့အခွင့်အေ၇း
ကွာတယ်ခည ….လူ့ဘ၀ဆိုတဲ့ ပြဇာတ်ကြီးအပေါ်မှာ ကပြ အသုံးတော်ခံတဲ့ နေရာလေးတွေ
ကွာသွားလို့ …အခွင့်အရေးလေးတွေကွာတာ လစ်ဘရယ် ကျကျ ခံစားနားလည်စေချင်တယ်
ပိတ်သတ်ကြီးရယ် …အဟုတ်ပါ…… ဥပမာလေးနည်းနည်းရိုင်းမယ်ဗျာ..(တခါက ဖတ်ဖူးတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး
တောမြို့လေး တမြို့ဆိုပါစို့ …မြို့ပြင်ဇရပ်မှာ အနှီ ဆိုက်ကားသမားတွေ …ဖဲစုရိုက်ကြသတဲ့ …..
၅၀ကြေး ၁၀၀ကြေးပေါ့ဗျာ ..များများလည်း မလောင်းနိုင်ရှာပါဝူး ….. လှည့်ကင်းကတွေ့တော့…
အဲ့သည့် ဖဲဆြာ ဆိုက်ကားသမားများ အချုပ်ကျပါသတဲ့…
ကျောင်းဆရာ လူငယ်လေးတွေ …ပိုကာဆွဲမိကြပါသတဲ့ …. လှည့်ကင်းက တွေ့ပါသတဲ့
ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ … “ဆြာလေးတို့ရာ အဆောင်မှာပဲ ကစားကြပါ လူမြင်ကွင်းမို့
မသင့်တော်လို့ပါ …. နောက်တခါဆို ကျနော်တို့လည်း အရေးမယူလို့ မရလို့ပါ” တဲ့…
ကဲကြည့် ဒါကို discrimination လို့ပြောမလား အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားလို့ပြောမလား ….
၁) ထိုဆြာလေးများ၏ ဘ၀ ကိုကယ်တင်လိုက်ပါသည်(ဆိုက်ကားသမားကတော့
ဖဲရိုက်လို့ …အချုပ်ကျဖူးတယ်ဆိုလည်း ..အုံနာ ရှားမည်မဟုတ်ပေ)
၂) ထိုမြို့လေးမှ ကျောင်းသားများ၏ ဘ၀ ကို ကယ်တင်လိုက်ပါသည်(သည်ဆြာတွေ
အချုပ်ကျ အလုပ်ပြုတ်…နောက်ဆြာမျှော်… သိတော်မူသည့်အတိုင်း..)
၃) သူဥပဒေကို လက်တလုံးခြားလို့ပြောမလား… မျက်ကွယ်ပြုသည်ပြောမလား..
လုပ်လိုက်တာ မည်သူ့ကိုမျှ မထိခိုက်သွားပါ …..
“right(correct) something wrong” မဟုတ်ရင်တောင်
“Prevent something good from stopping” ဖြစ်နေပါသည်
သဂျီးရေ့ ကျုပ်တော့ ဘုရှ် ကို သိပ်နှစ်သက်သဗျ…
သူခံရတဲ့ pressure လည်း နည်းမှ မနည်းဘဲကိုး……
သူ့ပေါ်လစီကိုလည်း ထောက်ခံသဗျာ …(အိုဘားမား တက်လာတော့
နောက်ပိုင်း ဟွန့် …. ဘု နဲ့လည်း မကွာဘူး ပြောခဲ့တာ အမှတ်ရပါသည်..)
ဘာလဲ ဘု မကောင်းဘူးပြောမလို့လား …..
ကြုံရင်ရှင်းမယ်ဗျာ ..ဘု စစ်တိုက်တာ လွန်တယ်ထင်တဲ့လူတွေ
ဦးအောင်ဇေယျနဲ့ မစ္စတာ ကျော်ထင်နော်ရထာ ကို ခေတ်သစ်လူသတ်ကောင်စာရင်း
သွင်းထားပြီး ကျုပ်ပိုစ့် ကိုစောင့်ဖတ်ကာ …အားပါးတရ ဆဲသွားနိုင်ပါကြောင်း…….
ပုံ….သမတ မလုပ်မှီ/သမတ လုပ်ပြီး :-)
ကိုချက်စူရေ မပြောမဖြစ်ပြောရတာပါ ကျွန်တော်ကလည်းဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသူဆိုတော့ပြောရတာပေါ့ အခုပြောတဲ့လစာတွေကို သမတကြီးက ရုပ်သံမိန်းခွန်းတစ်ခုမှာအကျိုးမခံစားသေးပါ နောက်တော့မှဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဖူးပါတယ် လွှတ်တော်စကာစက3လလောက်ပဲယူခဲ့တာပါ ယခုလက်ရှိမယူဘူးလို့သိရပါတယ် ဘာတွေလွှဲနေလည်းတော့မသိပါ နီးစပ်ရာကိုသာမေးကြပါကုန်….
သဂျီးကလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၈၈ အာဏာမသိမ်းမီ ပုံနဲ့ အခု ပင်စင်ယူပြီးပုံ နှစ်ပုံလည်း ပြဦးလေ။:)
ဘယ်လောက် တိုင်းပြည်အတွက် …..စားခဲ့ ယောင်လို့ ဦးနှောက်စားခံပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ။
၀မ်းသာပါတယ်။၀ိုင်းမန့်ကြလို့။ ယူထားတဲ့လစာ၊အခွင့်အရေးနဲ့တန်အောင်လုပ်ရင် ပြည်သူတွေက ကျေနပ်မှာပါ။